နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » X-Men Wolverine Tokyo Fury
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: X-Men Wolverine Tokyo Fury
ကစား: 76,577 tag ကို: The Wolverine, The Wolverine Games, X-Men, X-Men Games, သူရဲကောင်းဂိမ်း, သူရဲကောင်း
စူပါဟီးရိုးအင်း AS Barbie နှင့်ခြေးပိုးထိုးအားလုံးရာဇဝတ်မှုကနေမြို့ခုခံကာကွယ်ဖို့လိုအပ်ပေမယ့်သည်သူတို့ကောင်းစွာထုတ်လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသီးအသီးဇာတ်ကောင်များ၏ဗီရိုကိုဖွင့်ပြီးသူတို့အဘို့ဘိန်းဖြူကိုကြည့်ဆောက်လော့။
ဒီ Green Lantern ဂိမ်း Zilius Zox, Razer နှင့် Atrocitus တူဆိုးမီးအိမ်နီဆန့်ကျင် Hal ယော်ဒန်မြစ်တွင်း။ နယ်စပ်အာကာသမှတဆင့်ပျံသန်းနှင့်ဆိုးသောမီးအိမ်နီတိုက်ဖျက်ဖို့ Green Lantern ရဲ့လက်စွပ်၏တန်ခိုးကိုသုံးပါ။ GE အားဖြင့်အမြင့်ဆုံးရမှတ်အဘို့ရိုက်
Avengers နှင့် ultron ၏သံယောက်ျားသည်မြင့်တက်လာ
Ultron ပြန်ကြောင်းနှင့်သူ့ကိုအနိုင်ယူဖို့သငျသညျအထိပါပဲ။ Iron Man အဖြစ် Play နှင့်လျင်မြန်စွာဂိမ်းရိုက်နှက်နေ့ကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက် Ultron ရဲ့ဒုံးကျည်ရှောင်! ဝေမျှမယ် Avengers သင်၏မိတ်ဆွေတစ်ဦးသည်အ Ultron ဂိမ်း၏ Iron Man ထနှင့်ပျော်စရာရ
အံ့ဩခြင်းစူပါသူရဲကောင်းများရုပ်ပြဖုံး Builder ။ သင်အကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းများ, လူကြမ်းအဖြစ်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များကိုသရုပ်ဆောင်သင့်ကိုယ်ပိုင်စူပါကာတွန်းဖုံး Create!
တရားမျှတမှုသေစားသေစေသော Captain America ဒိုင်းလွှားကို
တရားမျှတမှု၏ Avengers ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက် Shield ကို။
ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်နီဦးခေါင်းခွံကိုအနိုင်ယူဖို့မစ်ရှင်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကင်ပိန်း Mode ကိုသို့မဟုတ် Survival Mode တွင်ကစားရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာအောင်အခြားအဆုံးအဖြတ်ရွေးချယ်မှုရှိပါတယ်။ သူကသူ့ကိုအထူး abilitie သုံးစွဲဖို့ရှိပါတယ်
ကြီးမားတဲ့သူရဲကောင်း6အေးဂျင့်
စူပါဘက်ထရီနှင့်အတူတပါးစက်တွေဖွင့်ဖို့, ဒါပေမယ့်သူအပေါငျးတို့သစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတားအဆီးများအားဖြင့်ညွှန်ပြတည်နေရာမှဘက်ထရီယူရန်လိုအပ်မည်စက်ရုပ် Baymax ကိုကူညီပါ။
Batman ကမ္ဘာသစ်မှာတစ်ဦးစွန့်စားမှုရှိသည်, သူ့ကိုမြှားသော့နှင့် A key ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်အားလုံးရန်သူတိုက်ခိုက်ကူညီပေးပါတယ်။
သငျသညျ vs hulk
, ကား Bash တပ်များနှင့် Wolverine နှင့် Asgardian သူရဲကိုတိုက်မှလက်နက် X ကိုစက်ရုံတဆင့်မထိမခိုက်။
စိတ်ကူးလေး: စက်မှုလယ်ယာ maelstrom
ဆရာဝန် Doom တခါထပ် Fantastic Four မှကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေသည်။ ဒီအချိန်သူကစက်ရုပ်တစ်ခုတပ်မတော်ကိုအသုံးပွုဖို့လိုသည်။ အသီးအသီးသည့်အဆင့်ရဲ့အစမှာသင်ဤ Insidious ရန်သူကိုတိုက်မည်သူနှစ်ဦးအဖွဲ့သည်အဖွဲ့ဝင်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဤမြို့မှထွက်လမ်းကိုရှာတွေ့ Batman ကိုကူညီပါ။ များစွာသောအဆင့်ဆင့်ဂိမ်းထဲမှာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ပြီးအောင်နှင့်ပိုပြီးရမှတ်ရပါ။
ဒီဂိမ်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Batman ပြန်လာ။ သူ့ရဲ့မစ်ရှင်က New York မြို့ဖကျြဆီးဖို့အားလုံးကိုရန်သူကိုသတ်သည်။ သူ့ကိုလမ်းအပေါင်းတို့၌ရန်သူကန်နှင့်ဤဂိမ်းအားလုံးအဆင့်အတန်းပြီးအောင်ကိုကူညီပါ။
hulk မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးလိုသူအများအပြားရှိပါတယ်ဘယ်မှာသမိုင်းမတင်မီရွာအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ သူ့ကိုရှိသွားပြီအာဏာကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဤပစ္စည်းများကိုသုံးဦးချင်းစီအဆင့်ကိုဖြတ်သန်းပြီးနောက်သူတို့အားကျောက်ခဲတို့ကိုပစ်ကိုကူညီပေးပါ။